Tag: akụrụngwa | Martech Zone
Na teknụzụ na-agbanwe agbanwe taa, iduga ndị otu azụmaahịa dijitalụ dị irè nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Na-eche mkpa maka nkà na ụzụ nke ọma na nke dịgasị iche iche, nkà ziri ezi, usoro ahịa ahịa, na nsogbu ndị ọzọ. Nsogbu ndị ahụ na-amụba ka azụmahịa ahụ na-eto. Otu i si edozi nchegbu ndị a na-ekpebi ma ị ga-eso otu ndị na-arụ ọrụ nke ọma nke nwere ike izute ebumnuche azụmaahịa gị n'ịntanetị. Nsogbu Mgbasa Ozi Otu Ndị Ahịa na Otu A Ga-esi Na-ezute Ha Haringing ezu Budget One
Tumult Hype bụ ngwa Mac OS X nke na-enye gị ohere ịmepụta ọdịnaya mmekọrịta na mmegharị na ọdịnaya HTML5. Peeji ndị ejiri Tumult Hype rụọ ọrụ na desktọọpụ, smartphones na iPads na-enweghị koodu achọrọ. Nwere ike ịzụta otu Tumult Hype 2 site na Storelọ Ahịa Ngwa rue Septemba 10 maka $ 29.99! Hydị Hype (Mac OS X) nwere atụmatụ na mmekọrịta mmekọrịta, gụnyere: Animations - Tumult Hype's key animme based animation system na-ewetara gị
Tọzdee, Disemba 23, 2010 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Izu a abụwo izu siri ike… ọtụtụ nrụgide, ọtụtụ mgbanwe, na ọtụtụ ọganihu. Na 42 afọ, M mara mma ka m ụzọ ma m nwere ihe omume a izu na n'ezie kụrụ ike. Anọ m na-ekwu ruo oge ụfọdụ na mgbasa ozi ọha na eze bụ ihe nkwalite dị egwu - mana na ụlọ ọrụ ndị na-emebu mmekọrịta ọha na eze bụ ezigbo ndị na-enweta ma nweta site na mgbasa ozi. Ndị ụlọ ọrụ
Na mgbanwe nke ụlọ ọrụ kọmputa, anyị nwere Akụrụngwa - akụrụngwa dị mkpa iji rụọ ọrụ ahụ. Anyị nwere sọftụwia, azịza nke jiri ihe ndị ahụ wee rụọ ọrụ anyị nwere ike ịzụta ma wụnye site na mgbasa ozi dị iche iche. Naa, ị nwere ike ibudata software enweghị media. Afọ iri nke akụrụngwa na ngwanrọ akụrụngwa nwere nkwalite na nnọchi. N’ezie, echefula m kọmputa niile m nwere taa. M